Tani ma ahan Istaraatiijiyad Suuqgeyn Saameyn leh, Jooji! | Martech Zone
Tani ma ahan Istaraatiijiyad Suuqgeyn Saameyn leh, Jooji!
Sabtida, Juun 22, 2017 Isniin, Janaayo 18, 2021 Douglas Karr
Buuq badan ayaa ka jira baraha bulshada oo mararka qaar ay adag tahay in lala socdo. Waan jeclahay xaqiiqda ah inaan haysto taageerayaal fara badan oo khadka tooska ah waxaanan isku dayaa inaan la falgalo oo aan u jawaabo qof kasta oo codsi sameeya. Marka ay tahay shirkad aan horey ula soo xiriiray, waxaan si gaar ah waqti u helaa oo aan uga jawaab celiyaa si waafaqsan.
Taasi waxay tiri, waxaa jira istiraatiijiyad xun oo bilaabaneysa soo ifbixinta khadka tooska ah ee waqtigayga ku cunaya farriimaha tooska ah iyo farriimaha bartilmaameedka ah. Shirkaduhu waxay daabacayaan codsiyo shaqsiyeed aniga sida midka hoose si ay iiga helaan inaan ka jawaabo ama la wadaago dhagaystayaashayda. Ma hubo inay si otomaatig ah u shaqeynayaan ama gacmo-ku-bogsiintooda, laakiin way xanaaqayaan - waana u sheegayaa iyaga.
Halkan waxaa ku yaal hal tusaale. Waxaan sidoo kale tan ka helayaa shirkado kala duwan fariin toos ah iyo emayl sidoo kale. Waan ka saaray magaca wakaaladda maaddaama ay inta badan la soo baxaan waxyaabo aad u fiican oo la xiriira dhagaystayaasheena. Qoraalkan hoose; si kastaba ha noqotee, maaha mid ka mid ah farriimahaas. Kamaan sheekeysanayn Snapchat, cidna kamaan codsan talobixin ku saabsan Snapchat, mana daneeyo Snapchat-keeda muuqaalka ugu dambeeyay.
Maxay tani u tahay Istaraatiijiyad saameyn badan oo saameyn badan?
Kani waa shakhsiyad si toos ah u soo jiidanaysa dareenka oo dareenkeyga ka qaaday shaqadayda kale. Meelaha emaylku waa hal shay, waxaan u helayaa inaan dib u eego waqtigayga oo aan ka jawaabo ama u tirtiro hadba sida loogu baahdo. Waa tan isbarbar dhigga (waaqiciga ah):
Dhacdada A: Waxaan fadhiyaa miiskeyga anigoo shaqeynaya, waxaana soo galay garoon weyn oo emayl ah. Garoonka waxaa weheliya farriimo kale oo ka imanaya macaamiisha iyo rajada. Midkoodna kuwa i soo diray ma iga filayaan inaan isla markiiba ka jawaabo, in kastoo. Markaan helo fursad aan ku hubiyo emaylka, waan hubiyaa oo jawaabta ku celceliyaa.
Dhacdada B: Waxaan fadhiyaa miiskeyga anigoo shaqeynaya, adigana waad iga dhex gashay, i weydii haddii aan xiiseynayo mowduuc aanan waligey kaagala hadlin. Hadda, dadka badankood ee aniga iga dhex gala waxay leeyihiin wax muhiim ah oo ay i weyddiistaan ​​waxay gartaan in waqtigeygu qiimo badan yahay iyo kheyraadka kaliya ee yar. Kaliya uma socon lahaayeen.
Bartilmaameedka noocan ah ayaa meesha ka saaraya qiimaha waqtigeyga wuxuuna iga qaadayaa dadka doonaya inay ila hadlaan ama u baahan caawimaaddayda.
Haddii aad u malaynayso inay tani tahay istiraatiijiyad suuqgeyn wax ku ool ah oo saamayn ku leh - is-gaadhsiinta iyo carqaladaynta maalinta oo dhan - waad khaldan tahay. Fadlan ixtiraam waqtigayga. Haddii aad shakhsi ahaan ila soo xiriiri doonto baraha bulshada, samee markaan albaabka u furo wadahadalkaas. Haddii kale, u faafi fariintaada sidii caadiga ahayd - adiga oo aan shaqsi ahaan ii calaamadin.
Si aad ula shaqeysid dadka wax saameeya, waxaad u baahan tahay inaad xiriir nala sameysato. Waxaan u baahanahay inaan ku kalsoonaado inaad u jeeddo waxtarkeyga oo aadan khatar gelineyn kuwa raacsan. Kani waa ma ahan istiraatiijiyad suuqgeyn saameyn ku leh.
Tags: suuqgeynta suuqgeyntawarbaahinta bulshadaTweetfariin twitter ah
LegalZoom wuxuu hirgeliyaa Sirdoonka Artifishalka iyadoo la adeegsanayo Veritone One
7 Istaraatiijiyooyinka lagu Kordhiyo Ka Qeybgalka Instagram